Dawladda Magaalada Seattle waxay hadda kugu martiqaadaysaa rugaha caafimaadka ee la isku tallaalo COVID-19. Fadlan si taxadar leh u eeg macluumaadka hoose maadaama tafaasiisha ay ku kala duwan yihiin goob kasta.
1. Xarunta Tallaalka Bartamaha Magaalada Seattle (Downtown Seattle)
Goobta: Virginia Mason Franciscan Dhismaha Kheyraadka Caafimaadka (HRB), 909 University St, Seattle, WA 98101
Saacadaha Shaqada: Axadaha laga bilaabo 10:00 subaxnimo - 2:00 galabnimo iyo Isniinta iyo Talaadada laga bilaabo 1:00 duhurnimo - 5:00 galabnimo
Waxaa la bixiniyaa Tallaalka: Pfizer, Moderna
2. Xarunta Tallaalka Koonfurta Seattle (South Seattle)
Goobta: SouthEast Seattle Senior Center, 4655 S Holly St, Seattle, WA 98118
Saacadaha Shaqada: Talaadada iyo Khamiista laga bilaabo 1:00 galabnimo - 7:00 galabnimo
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad dib u eegto tan warqadeena Ogow ka hor intaadan tegin ballantaada Xarunta Tallaalka Koonfurta Seattle.
3. Xarunta Tallaalka Galbeedka Seattle (West Seattle)
Goobta: Neighborhood House, 6400 Sylvan Way SW Seattle, WA 98126
Saacadaha Shaqada: Jimcaha 11 subaxnimo - 7 galabnimo, iyo Sabtiyada 8:30 subaxnimo - 4:30 galabnimo
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad dib u eegto tan warqadeena Ogow ka hor intaadan tegin ballantaada Xarunta Tallaalka Galbeedka Seattle.
Siyaabaha Kale ee aad Talaal ku heli karto
Ballamo ayaa looga baahan yahay xarumaha tallaalka ee ay maalgeliso Magaalada Seattle ee carruurta 5-11. (Bogga waxa lagu heli karaa Ingiriis oo keliya.)